Cielo Studio - Ukuzola ngaphandle kwendlela
Indawo izolile kwaye ibekwe ecaleni kwenduli epholileyo yaseMonte Carmelo. Phumla amehlo akho kwiimbono zeCaribbean, kwaye uphumle iinyawo zakho kwi-plunge pool. I-plunge pool inejethi ezinamandla zokuphumla ekugqibeleni. I-Wifi kuyo yonke ipropathi inokwenza ukuba i-hammock, idekhi kunye neendawo zamadama zibe nemveliso ngokunjalo. IMonte Carmelo yibharrio efuna ukuba ube neyakho isithuthi, ukanti ibekwe embindini wedolophu yaseIsabel kunye nomqolo wokutyela ongaphambili wolwandle we-Esperanza.
Ekupheleni kwesitalato sethu sokuphela, unesango lakho labucala elinendlela ehlayo eya kwiyunithi engundoqo eyahlukileyo (kodwa incamathele kancinci). Ukukhanya komtya othambileyo kunye nomthombo wamanzi othambileyo wenza isakhelo sedesika enkulu phambi kwendawo yokungena. Ukungena esithubeni ubona ibhedi entsha kraca evula ibhedi yesibini. Igumbi lokulala lingaphandle kwegumbi lokuhlala, kunye nebhedi yokumkanikazi etofotofo ngokumangalisayo, izithunzi ezimnyama kunye neA/C. Isithuba sinombono ovulekileyo, ngoko ke impepho kunye nokukhanya kuhamba ngokugqibeleleyo. Ikhitshi lisebenza ngokupheleleyo kunye nesitovu segesi, i-oveni, isinki ngokujonga ichibi, umenzi wekofu, itoaster, ifriji egcweleyo kunye nazo zonke izitya, iimbiza, iipani kunye nezixhobo onokuzifuna. Ngaphandle kwakho uneshawa yakho yangaphandle yokuhlamba emva kolwandle. Sinikezela ngeelinen ezintsha, iitawuli zaselwandle, izitulo zaselwandle kunye nepholile. Sinempahla yokuhlamba xa ufuna, akukho ntlawulo yongezelelweyo. Okokugqibela, iminyama ekufutshane yemihla ngemihla kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo simahla nako.
Indawo esihlala kuyo sisitalato sasemaphandleni esithandekayo, esizolileyo, sabahlali. Amahashe, iinkukhu, ooxam, oonqinishe, kunye namasele ethu esiwathandayo abizwa ngokuba likhaya lethu. Nceda uzonwabele zonke!
Ndiza kulungiselela ukudibana nawe ndikuse endlini. Sihlonipha ubumfihlo bakho kwaye ziyafumaneka naziphi na iingcebiso, iingcebiso, imibuzo, njl. Sinezinja ezincinci kwipropathi, kodwa sinamasango amaninzi okubagcina ngaphandle kweendawo zakho.
Ndiza kulungiselela ukudibana nawe ndikuse endlini. Sihlonipha ubumfihlo bakho kwaye ziyafumaneka naziphi na iingcebiso, iingcebiso, imibuzo, njl. Sinezinja ezincinci kwipropathi,…